क्यान्सरको उपचारमा पोषणयुक्त खाना एक उपचार पद्धतिभित्रै पर्छ - Health TV Online
/ शुक्रबार, ९ फाल्गुन, २०७६
३० बैशाख २०७६, सोमबार
क्यान्सरको उपचारमा पोषणयुक्त खाना एक उपचार पद्धतिभित्रै पर्छ
क्यान्सर रोग लागे पछि यसको जतिसक्दो छिटो उपचार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त हामीलाई थाहा छ । तर यो सँगै यो रोगको उपचार गरिरहँदा खानपानमा पनि त्यत्तिकै ध्यान पुर्याउनुपर्छ भन्ने पनि जान्न जरुरी छ । क्यान्सर लागेको थाहा पाइसकेपछि शीघ्र उपचारको जति आवश्यकता हुन्छ, त्यति नै बिरामीलाई सन्तुलित खानपान आवश्यक पर्छ।
लगभग सबै प्रकारका क्यान्सरमा बिरामीलाई खानामा खासै रुचि हुँदैन जसले गर्दा बिरामीले खानेकुरा खानै छोड्छन्। क्यान्सरले गाल्दै लगेको बिरामीलाई यसले झनै कमजोर बनाउँछ।
अर्को कुरा बिरामीमा यो खान हुन्छ कि हुँदैन, त्यो खान हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अन्योल पनि हुन्छ। त्यसैले कतिपय बिरामीले आफै फैँ खाना बारिरहेका पनि हुन्छन्। एक त रोगले कमजोर बनाएको हुन्छ त्यसमा खाना बार्दा बिरामी शारीरिक रूपमा पनि कमजोर बन्दै जान्छन्। जसले रोग निको हुन बाधा पर्न सक्छ ।
त्यसो त चिकित्सक र डाइटिसियनले यो खानेकुरा खान हुन्छ भन्दा पनि खान नमान्ने बिरामीहरु पनि प्रशस्तै छन्। खान हुन्छ भनेर पठायो एक सातापछि ‘यो पनि खान हुन्छ र’ भन्दै आउँछन्। तर हामी सम्झाउँछौं ।
क्यान्सरको उपचारमा पोषणयुक्त खाना एक उपचार पद्धतिभित्रै पर्छ। यो रोगको उपचारका क्रममा विभिन्न ‘साइड इफेक्ट’हरु देखिन सक्छन् जसका कारण बिरामीमा खानामा रुचि नहुने, बान्ता हुने, रिंगटा लाग्ने, खाएको नपच्नेजस्ता समस्या देखा पर्छन्। यसो भयो भन्दैमा खाना खान छोड्नु हुँदैन।
यस्तो अवस्थामा दुई दुई घण्टामा थोरै थोरै गरेर खानुुपर्छ। यदि पचाउन गाह्रो भएको छ भने नरम बनाएर खान सकिन्छ। बिरामीले तरकारी खान सकिरहेका छैनन् भने त्यसलाई जुसको रूपमा दिन सकिन्छ। हेरचाह गर्नेले पनि बिरामीले खान सकेन भनेर नदिने होइन, कुन रूपमा दिँदा उनीहरूलाई खान सजिलो हुन्छ र पोषण पनि पुग्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ।
यदि बिरामीलाई केमोथेरापी दिइएको छ भने त्यस्तो बेलामा काँचो सलाद दिन हुँदैन। पचाउन गाह्रो हुन्छ । बिरामीलाई खान मन लागे बफ्फाएर मात्र दिनुपर्छ। यसैगरी बट्टामा राखिएको अचार, तारेको खाना, बोसोयुक्त र चिल्लो खाना जुस र प्रोसेस्ड खाना सकेसम्म नदिँदा राम्रो हुन्छ । यस्ता खानेकुराले हानी गर्छन ।
सकेसम्म घरमा सफासँग बनाएको ताजा खाना दिनुपर्छ। माछा, मासु, अण्डा, दूध, चीज पनिर खानामा समावेश गर्दा पोषणको कमी हुँदैन। खान सजिलो होस् भनेर स्वादका लागि ल्वाङ, सुकमेल र तेजपातको पनि प्रयोग पनि गर्न सकिन्छ। खाना सँगसँगै कसैकसैलाई चिकित्सक तथा डाइटिसियनको सल्लाह बमोजिम‘प्रोटिन सप्लिमेन्ट’ पनि दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले क्यान्सर निको हुन औषधि मात्र हैन खानाको पनि उत्तिकै महत्व हुन्छ ।
कविता नेपाल क्यान्सर हस्पिटल तथा रिसर्च सेन्टरकी क्लिनिकल डाइटिसियन हुन्।
थाइराइड क्यान्सर : पुरुषको तुलनामा महिलामा बढी
‘घुर्ने बानी होइन एक प्रकारको रोग हो’
प्रदूषणबाट बच्नुस्, फोक्सो जोगाउनुस्
महिना नपुगी जन्मिएका शिशुको जीवनरक्षाका लागि ‘मायाको अँगालो’
बालबालिकालाई खुवाउनुस् घरकै सन्तुलित खाना, आवश्यक पर्दैन ‘सप्लिमेन्ट’
केशमा चाया परेर दिक्क हुनुभएको छ?, यसरी पाउनुहोस् मुक्ति
चिसोमा बालबालिकामा हुने फ्लु : यसरी अपनाउनुस् सावधानी
सचेत रहे बच्न सकिन्छ स्तन क्यान्सरबाट (भिडियोसहित)
‘बिरामीहरू परिवारकै सदस्यजस्तो लाग्छ’
ठेकेदारको लापरवाहीले स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण अधुरै
मृत्यु हुनेको संख्या दुई हजार २४७, संक्रमण दर अघिल्लो दिनको तुलनामा बढ्यो
कान्ति बाल अस्पतालको निर्देशकमा डा. कृष्ण पौडेल
बर्दियामा दादुरा–रुबेला खोप अभियान
एआरटी सेवा लिन एचआईभी संक्रमितलाई सेवा लिन सकस
क्वारेन्टाइनमा रहेका १७५ जनामै कोरोना भाइरस ‘नेगेटिभ’
इरानमा दुईजनालाई कोरोना भाइरस संक्रमण
जापानमा पानीजहाज क्वारेन्टाइन : सबै यात्रुहरू बाहिरिँदै
थापागाउँ - १०, बानेश्वर, काठमाडौं
टेलिफोनः +९७७-०१-५२४४१६४, ९८४१९७५८६७
क्यामेरा / फोटो
साैरभ प्रसाइँ (प्रदेश १)
राजन के दाहाल (प्रदेश ३)
नवराज महतरा (प्रदेश ६)
डम्बर कलाैनी (प्रदेश ७)
Copyright © 2018 - Health TV Online. Developed by Webtech Nepal